OweKwaito ucelwe ukuba axolise ngezinsolo zokushaya | News24
OweKwaito ucelwe ukuba axolise ngezinsolo zokushaya
Johannesburg - Ngempelasonto edlule, kubikwe ukuthi isihlabani somculo weKwaito esiphinde sibe ngusomabhizini, u-Arthur Mafokate, sikushaya intombi yaso engumculi, uCici.
Kuzwakale ukuthi lezi zithandani zaxabana emzini ezihlala kuwo zombili, uCici wamangalela u-Arthur.
U-Arthur waboshwa, amaphoyisa akuqinisekisa ukuthi wachitha ubusuku obubodwa esitokisini wabe esededelwa ngebheyili yemali engu-R500.
OLUNYE UDABA:U-Arthur Mafokate ulaxaze bonke abaculi bakhe evala inkampani – Umbiko
Namuhla iMens Forum okuyinhlangano ezimele icele u-Arthur ukuba axolise ngesigameko.
Okhulumela iMens Forum uBongani Ngomane uthe, "Kufanele usukume usho ukuthi lokhu akulungile, kufanele kuphele, lokho kuzothumela umyalezo wokuthi uma unezinkinga kunoma yisiphi isimo udlame alusilo isixazululo.
"Futhi uma kusukuma indoda efana no-Arthur, iphimisa lawo mazwi iphinde ixolise, lokhu kuzolungisa ubudlelwane obuba phakathi komuntu wesilisa nowesifazane ezweni."